Ngaba singazisebenzisa ii-AirPods zethu kwinqwelomoya? | Ndisuka mac
Ngaba singazisebenzisa ii-AirPods zethu kwinqwelomoya?
UJavier Porcar | | Izixhobo, Ezahlukeneyo
Iinqwelo-moya zihlala ziguquka. Ukuvela kwezixhobo eziphathwayo kubabambe ngonyawo, kwaye ekuqaleni azinakusetyenziswa nangaliphi na ixesha xa kusenziwa inqwelomoya. Emva koko, umthetho uyakhululeka, kuba iinqwelomoya ezintsha zinobuchwephesha ukunqanda uphazamiseko kwizixhobo.
Ke ngoko, ukuba ngexesha lokuhamba ngenqwelomoya kufuneka ukubulala ixesha lokumamela umculo okanye ukubukela ividiyo kwi-Mac yethu ngee-AirPods, isenokungabi ngumbono olungileyo. Uninzi lweenqwelomoya ziya kuthintela ukusetyenziswa kwee-headphone zeBluetooth, ngamanye amaxesha ngaphandle kokuchazwa.
I-Air Canada, umzekelo, ivumela ii-AirPods ukuba zisetyenziswe kwiinqwelomoya ezimfutshane kwaye kuphela ngaphezulu kokuphakama kweenyawo ezili-10. Siyazi nomzekelo Air France, apho zivaliwe iingcango zenqwelomoya, Isithintelo ekusebenziseni ii-headphone ezingenazingcingo sisebenza kubo bonke abahlali. Inqwelo moya yatsho ukuba izixhobo ze-elektroniki eziphathwayo ezenza ukutshintshiselana ngedatha, nokuba yi-Wi-Fi, iBluetooth, i-GSM, njl. Kuya kufuneka bengekho ngexesha lonke lokuhamba ngenqwelomoya.
Namhlanje, abakhweli beenqwelomoya abasebenzisa ii-AirPod ngaxeshanye (okanye esinye isixhobo esivela kwezinye iimveliso) banqabile. Esi sesinye sezizathu zokuba iinqwelomoya zingacingi ngokufumana isisombululo. Ukubuyela umva ekuqaleni kwenqaku: kuya kuthatha iinyanga ezininzi de kube iyahambelana ukubhabha ngee-headphone ze-Apple Bluetooth. Kude kube lelo xesha, sicebisa ukuba uphathe ii-EarPods zethu ebomini bakho kwimithwalo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngaba singazisebenzisa ii-AirPods zethu kwinqwelomoya?
Ukusuka eSyberia ukuya eNyangeni ngale midlalo mibini mitsha yempelaveki